ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: “လွှတ်တော်အမတ်တွေဟာ ကိုယ်တိုင်တော့ လွှတ်တော်တွင်း ပြောချင်ရာ ပြောဆိုဆွေးနွေးနိုင်ပြီး သာမန်ပြည်သူတယောက်ကတော့ ကိုယ့်ထင်မြင်ချက်ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဖော်ထုတ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုရင် တရားမျှတပါရဲ့လား။” (အသံ)
“လွှတ်တော်အမတ်တွေဟာ ကိုယ်တိုင်တော့ လွှတ်တော်တွင်း ပြောချင်ရာ ပြောဆိုဆွေးနွေးနိုင်ပြီး သာမန်ပြည်သူတယောက်ကတော့ ကိုယ့်ထင်မြင်ချက်ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဖော်ထုတ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုရင် တရားမျှတပါရဲ့လား။” (အသံ)
လွှတ်တော်ကို ဝေဖန်ရေးသားခဲ့တဲ့ ဘယ်သူမှန်း မသိသေးတဲ့ ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ဖော်ထုတ်အရေးယူဖို့ ကော်မရှင်ဖွဲ့လိုက်ပါတယ်။ လွှတ်တော်အမတ်တွေဟာ ကိုယ်တိုင်တော့ လွှတ်တော်တွင်း ပြောချင်ရာ ပြောဆိုဆွေးနွေးနိုင်ပြီး သာမန်ပြည်သူတယောက်ကတော့ ကိုယ့်ထင်မြင်ချက်ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဖော်ထုတ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုရင် တရားမျှတပါရဲ့လား။ ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ လွှတ်တော်အမတ် ဦးဖုန်းမြင့်အောင်ကို ဒေါ်ရီရီအောင်က မေးထားပါတယ်။
အင်း--လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများ အနာပေါ် ဒုတ်ကျပြီထင်ပါ့--အုံဖွ-နာဘူး-နာဘူးနော်-
တကယ်လို့ ..စုံစမ်းစစ်ဆေးလို့ ဒေါက်တာဆိပ်ဖွားက အချက်အလက်နဲ့ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ တင်ပြနိုင်လို့ ဒေါက်တာ ဆိပ်ဖွား မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်ခဲ့ရင် ထောက်ခံ တင်ပြခဲ့တဲ့ လွှတ်တော်အမတ်တွေကိုရော ဘယ်လိုအရေး ယူမှာလဲ..
စိုးရင် ဆိုတာ နာမည်အရင်းက စောက် ရူး ကွ။
power hungry ဆိုတာ ဒါကိုပြောတာပဲ
အေးးးးး တစ်ခုပြောလိုက်မယ် လွှတ်တော်
myo myanmar ပြောတာမှန်တယ်ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားကအချက်အလက်ပြည်စုံနဲ့ထောက်ပြနိုင်ခဲ့ရင်မင်းတို့ဘာဆက်လူပ်မလဲစဉ်းစားထားပါ။မြေနိမ့်ရာ လှန်စိုက်ချင်ကျတယ်။ပြည်သူတဦးတရောက်ကအခုလို့တကြိမ်တခါမှားခဲ့ရင်တောင်နောက်မမှားဖို့သတိပေးလိုက်ရင်ပြည်သူတွေနားလည်ပါတယ်ကွ။ခင်ဗျားတို့လွတ်တော်တွေလဲးသတိပိုရှိသွားတယ်ပေါ့။ခုမှဒီမိုကရေစီဖွံဖြိုးစအချိန်လေးမှာဒီလိုဝေဖန်တာဟာကောင်းမွန်တဲ့သတိပေးခေါင်းလောင်းထိုးသံလေးပါ။နှစ်ပေါင်းများစွာအာဏာလက်အောက်မှမွန်းကြပ်ခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေ ဒီအချိန်မှာဒါမျိုးအန်ကျလာတာအပြစ်မဆိုသာပါဘူး။လွတ်တော်အနေနဲ့ဒါမျိုးသဲ့သဲ့လေးမှမဖြစ်ရမဝေဖန်ရလေအောင်ငါတို့ကြိုးစားရမည်ဟူသာသင်ခန်းစာယူသင့်ပါသည်။
ဒီကိစ္စကြီးကတော့ လွှတ်တော် နဲနဲလွဲနေပါပြီ။ နဲနဲမဟုတ်ပါဘူး.. လုံးဝကို အံချော်နေပါပြီ။ တိုင်းပြည်တိုးတက်ကောင်းစားရေးထက် မိမိသြဇာအာဏာ ပါဝါပြဖို့ကိုပဲ ရှေ့တန်းတင်လွန်းတယ်လို့ ရိုးရှင်းစွာ သဘောပေါက်ပါတယ်။
လူရယ်စရာအလုပ်တွေကို ရေးကြီးခွင်ကျယ်လုပ်နေတာကို အံသြစိတ်ပျက်မိတယ်။
ဆိတ်ဖွားဆိတ်ဖွား မင်းရဲ့ အတွေးအခေါ်ကြောင့်ဘွန်ဟောင်းတို့
အဖွဲ့ ကောင်းကောင်းမမှိန်းရတော့ဘူး။ဘယ် အမတ်လဲကွ အိ ပ်ငိုက်နေရာက ရုတ်တရက်လန့်နိုးပြီးအရေးတကြီးအဆိုတင်တာ။ ကိုယ့်အရှက်ကိုယ်ခွဲပြီး ကိုယ့်သိက္ခာကိုယ်ချကြတာပဲ။ တက္ကသိုလ်ဆရာကြီးရယ် ဆရာတောင်ဒီလိုဂကြောင် ဖြစ်နေမှတော့ သြော်တပည့်တွေလဲ ဒါပေမယ့်ဒါဟာတစ်ဦးချင်းရဲ့အတွေးအခေါ်ပါ။ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားတင်မကဘူး တစ်ခါတည်းနဲ့ စရိတ်နှစ်ခါမကုန်အောင် လွှတ်တော်ကိုထိခိုက်ပြီးcomment ပေးတဲ့သူတွေကိုပါအဆိုတင်သွင်းပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးကွာ။ခင်ဗျားတို့ကပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ် ဟိဟိ ဆိုတော့ ပြည်သူတွေခိုင်းလို့လုပ်တာဖြစ်မှာပေါ့။လေးစားပါတယ် ကမာရွတ်မြို့နယ်သားများ။ကမာရွတ်မှာ လူစွမ်းကောင်းတွေထွက်ပြီကွ။
ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားဘယ်သူလဲသိချင်ရင် (မင်းသိင်္ခ)ကိုသွားမေးပါ သူလုံးဝသိတယ်။
Other organizations, especially European have their practices...If you blame or complain or else them.. what they do say "thank you for yr. blame or complain or else, we will try to sort it out
for you". Then they find out and solve the problem with the best way.
They see what people saying bad words or good words. They just accept and review such all things to find the solution.That's all.
Why Burma ???? sensitive to people. Pls. should remind self that we are serving for country and country people.
That spirit or practice will be great & graceful!
လွှတ်တော်ကြီး နဲ့ ပြည်သူတစ်ဦးတည်းဗျာ။ဗမာပြည်ကို အရှက်ရစေပါတယ်။လွှတ်တော်ဆိုတာ ပြည်သူတွေကို အလုပ်အကြွေး ပြုဘို့ ပြည်သူတွေက ခိုင်းထားတာပါ။ပြည်သူတွေကို အရင်ပုံစံအတိုင်း စော်ကားဘို့မဟုတ်ပါဘူး။